Home Wararka Lafta Gareen oo lagu eedeeyay in uu dhagaha ka fureystay dadka la...
Lafta Gareen oo lagu eedeeyay in uu dhagaha ka fureystay dadka la soo tarxiilay
Waxgaradka ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo dhaliil u jeediyay Madaxweyne Lafta Gareen iyaga oo ku eedeeyay in uu ka gaabiyay in uu ka hadlo xadgudubka loo gaystay shacabka reer Koonfur Galbeed ee ku nool magalaada Laascaanood.
Isaga oo taas ka duulayo ayaa Madaxweyne Lafta Gareen waxa uu magacaabay guddi ku meel-gaar ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Koonfur –galbeed, kuwaas oo si sharci -darro ah iyo xoog ah ee Somaliland ugasoo saartay magaalada Laascaanood.
Guddigan ayaa waxay ka shaqeyn doonaan raadinta hantida dadka lagasoo barakiciyay magaalada Laascaanood, arrintaas oo Koonfur galbeed ay ku tilmaamtay mid sharci darro ah oo gef ku ah diinta iyo dhaqanka.
Guddigan waxay kaloo sameyndoonaan gurmadka iyo dib u dajinta dadka lasoo barakaciyay, kuwaas oo haatan qeybtooda ugu badan ay ku sugan yihiin deegaannada Puntland oo lagusoo dhoweeyay, waxaana madaxweynaha Koonfur galbeed uu guddigan faray in ay si degdeg ah ku bilaabaan howshooda. Guddigu wuxuu ka kooban shan xubnood, waxaana guddoomiye u ah wasiirka arrimaha gudaha Koonfur galbeed.